ဂျာနယ်များ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
2022 IWCA အွန်လိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် CFP - တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး ရှင်သန်ပါ။
IWCA သည်စာအရေးအသားစင်တာဂျာနယ် ၂ ခု၏ူဖစ်သည့်အဖြဲ: အစည်းဖြစ်သည်။ အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်.
အရေးအသားစင်တာဂျာနယ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ အရေးအသားစင်တာအသိုင်းအဝိုင်း၏သုတေသနသုတေသန၏အဓိကဂျာနယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။
လက်ရှိအယ်ဒီတာများဖြစ်သော Pam Bromley၊ Kara Northway၊ Eliana Schonberg နှင့်စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အယ်ဒီတာ Steve Price တို့၏စာတို -
စာအရေးအသားဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်မာသည့်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနနှင့်သီအိုရီဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရေးခြင်းစင်တာများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသောသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကြောင်းအဆုံးရန်, ငါတို့သုံးသောအလေ့အကျင့်မှကျူးလွန်နေကြသည်။ ကြှနျုပျတို့လုပျနိုငျမညျ:
·ကျွန်ုပ်တို့ပယ်ချရန်ရွေးချယ်ထားသောစာမူများအပါအ ၀ င်စာမူအားလုံးအပေါ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ။
·နှင့်ဆက်စပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များညှိနှိုင်း စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအသိုင်းအဝိုင်း။
စာမူတပုဒ်ကိုဘယ်လိုတင်သွင်းရမယ်၊ သုံးသပ်ချက်သုံးသပ်ချက်အပါအ ၀ င်ဂျာနယ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိလိုရင်၊ သွားပါ WCJဝက်ဘ်ဆိုက် http://www.writingcenterjournal.org/.
WCJ သင့်ရဲ့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် IWCA အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်.
WCJ အပြည့်အဝစာသားကိုရရှိနိုင်ပါသည် JSTOR 1980 မှ (1.1) မှလတ်တလောပြissueနာကနေ။
ရယူရန်အခြားနည်းလမ်းများ WCJ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် http://www.writingcenterjournal.org/find/
TPR ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ကြိုနှင့်အထက်တန်းကျောင်းပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းသူများကပညာသင်ဆုကိုမြှင့်တင်ရန်အွန်လိုင်းအပြည့်အဝ၊ ပွင့်လင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မှု၊ multimodal နှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်ဝဘ်စာသားဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် TPR: တည်းဖြတ်သူ@thepeerreview-iwca.org
TPR web ပေါ်မှာ: http://thepeerreview-iwca.org
အယ်ဒီတာ: Nikki Caswell
IWCA သတင်းလွှာအကြောင်း IWCA Update ကို, ယခုခရီးစဉ် ဒီမှာ။ အရေးအသားစင်တာပညာသင်ဆုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်အခြားစာပမြေားအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှု အရင်းအမြစ်s စာမျက်နှာ။